Mofon’aina – ALAROBIA 23 MAI 2018 – Athis Fanantenana
Sekoly Alahady 1 martsa
Mofon’aina – ALAROBIA 23 MAI 2018
27 Fa efa niangona marina tokoa teto amin’ ity tanàna ity Heroda sy Pontio Pilato mbamin’ ny jentilisa sy ny olona Isiraely hanohitra ny Mpanomponao Masina, dia Jesoa Izay nohosoranao,28 mba hanao izay notendren’ ny tananao aman-tsainao rahateo hatao.29 Koa ankehitriny, Tompo ô, jereo ny fandrahonany; ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin’ ny fahasahiana rehetra,30 omban’ ny aninjiranao ny tananao hahasitrana sy ny anaovana famantarana sy fahagagana amin’ ny anaran’ i Jesoa, Mpanomponao Masina.31 Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany; dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’ Andriamanitra tamin’ ny fahasahiana.
ASAN’NY APOSTOLY 4 :27-31
ENTO EO AMIN’NY TOMPO NY OLANA SY NY MANAHIRANA
1-Lazao Azy ny fototra olana
Vavaka nataon’i Petera sy i Jaona ary ireo mpino namany izao Mofonaina izao . Tsy nihafahafa izy ireo eo amin’ny and 27 nilaza ny fototra olana sy ny sokajn’olona mpanohitra ny finoana , ka nahatonga ny olona rehetra . Isika koa, rehefa tojo zava-manahirana dia aza misalasala milaza amin’ny Tompo ny fototry ny olana . Tsy hoe: manao tatitra na mampahafantatra fa mitaraina. Tsy ampahafantarinao ny zava-misy ny Tompo , satria efa fantany izany , fa natao hitarainana sy hilazana ny zava-manjo mbamin’ny olana kosa Izy.
2-Angataho ny hidirany an-tsehatra
« jereo ny fandrahonany »(and 29). Fangatahana ny handraisan’ny Tompo an-tànana ny toe-draharaha izany, ary sady fitalahoana Aminy mba hiditra an-tsehatra. Tsara hataontsika izany , satria ny Tompo efa nampanantena antsika fa ho fahavalon’ny fahavalontsika ary ho rafin’ny rafintsika (Eks 23 :22), sady momba sy hamonjy (Jer 1 :8 ,19 ,15,20) . Ny fidiran’ Andriamanitra an-tsehatra amin’ny trangan-javatra iray manjo antsika dia tsy maintsy mitondra famonjena .
3-Angataho ny hanomezany hery
Tsy nangataka ny hanafoanana ny olana sy ny fanenjehana ireo mpino mivavaka ireto, fa nangataka ny hanomezana hery sy fahasahiana aza. Notanterahin’ny Tompo ny fangatahan’izy ireo , ka izany no nanomezany ny Fanahy Masina (and 31). Tsy ny hanesorana ny olana matetika no vahaolana, fa ny hanomezana ny herin’ny Fanahy hiatrehana ny zava-misy.
Moa azo ampitahaina amin’ny an’i Jesoa tao Getsemane ve ny hevitra eto? (vakio hanampy antsika ny Lio 22 :39-46).
Mofon'aina - TALATA 22…